January 2018 – AsiaApps
Android Oreo version 8.0 ကိုကျော်ပြီး Version 8.1 ထုတ်တော့မယ့် Essential!
January 31, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Android Oreo version 8.0 ကိုကျော်ပြီး Version 8.1 ထုတ်တော့မယ့် Essential!
Essential ဟာ Android Oreo 8.0 Beta version နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ် ကတည်းကပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ Essential ဟာ Twitter ကနေကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကြေညာချက်ကတော့ Oreo version 8.0 ကိုကျော်ပြီး…
Galaxy S9 အတွက်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အချိန်နဲ့ စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung!
January 31, 2018 January 31, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Galaxy S9 အတွက်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အချိန်နဲ့ စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung!
Samsung အနေနဲ့ Galaxy S9 နဲ့ S9+ ကို ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးအပတ်လောက်မှာကျင်းပမယ့် MWC 2018 မှာထုတ်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပြီး စတင်ရောင်းချမယ့်အချိန်ကတော့ မတ်လအစပိုင်းလောက်မှာဖြစ်မှာပါ။ ကြည့်ရတာ ဒီဇင်ဘာလအလယ်ပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Galaxy S9 ရဲ့သတင်းဟာမှန်နေပြီနဲ့တူပါတယ်။ Website…
Snapdragon 845 chipset ပါဝင်တာပထမဉီးဆုံး Smartphone အမျိုးအစားဖြစ်နိုင်တဲ့ Xiaomi Mi Mix 2S!
January 30, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Snapdragon 845 chipset ပါဝင်တာပထမဉီးဆုံး Smartphone အမျိုးအစားဖြစ်နိုင်တဲ့ Xiaomi Mi Mix 2S!
Xiaomi ရဲ့လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမယ့် MWC 2018 မှာ High-end smartphone အမျိုးအစားကိုမိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi အနေနဲ့ High-end Smartphone အမျိုးအစားကို MWC မှာ မိတ်ဆက်သွားမှာက သေချာပေမယ့် ဘယ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့…
ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း logoတွေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ LogoScopic Studio – Logo Maker
January 30, 2018 January 30, 2018 MoonReviewsNo Comment on ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း logoတွေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ LogoScopic Studio – Logo Maker
Logo ဆိုတာ အသင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်း တန်ဖိုးထားရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား တံဆိပ်တစ်ခုပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု လုပ်ငန်းတစ်ခု ကို စတင်တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား logo တံဆိပ်တွေ မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက အကူအညီတောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင် logo လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်…
Xplay7 ကို 10 GB RAM နဲ့မကြာခင်ဖန်တီးတော့မယ့် Vivo!
January 30, 2018 January 30, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Xplay7 ကို 10 GB RAM နဲ့မကြာခင်ဖန်တီးတော့မယ့် Vivo!
Vivo ဟာ Xplay7 ကို 10 GB RAM နဲ့မကြာခင်မှာပဲ ဖန်တီးထုတ်လုပ်တော့မှာပါ။ Xplay7 ကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်း CES မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Under-diplay (UD) fingerprint feature လည်းပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။…
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့ရရင် မိသားစုထံအမြန်ဆုံး သတင်းပို့နိုင်မယ့် Shake2Safety – Personal Safety
January 29, 2018 January 29, 2018 MoonReviewsNo Comment on အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့ရရင် မိသားစုထံအမြန်ဆုံး သတင်းပို့နိုင်မယ့် Shake2Safety – Personal Safety
အခုနောက်ပိုင်းမှာ မှုခင်းသတင်းတွေ ခဏခဏ ကြားရတဲ့အတွက် အားလုံးပဲ အနည်းနဲ့အများ စိုးရိမ်မိကြမှာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ် အန္တရာယ်ဆိုတာ ကြိုပြီး မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း နည်းပညာတွေက တိုးတက်နေလို့ အကယ်၍ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုခုနဲ့…
January 29, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5, Pixel နဲ့ Pixel XL တို့ကိုစျေးလျှော့ရောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Dailysteals!
Dailysteals ဟာ Samsung Galaxy S7 Edge ကို $259.99, Galaxy Note5ကို $159.99, Pixel ကို $339.99 နဲ့ Pixel XL ကို…
Xiaomi ရဲ့ Mi7ဟာတော့မကြာခင် လအနည်းငယ်မှာပဲ $475 နဲ့ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်အရှေ့က model တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi6တုန်းကတော့ စျေးနှုန်းဟာ $360 နဲ့…
January 26, 2018 January 29, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း Zanco Tiny t1
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မေလမှာ ရောင်းချပေးတော့မယ့် ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း Zanco Tiny t1 ရဲ့သတင်းလေးကို ပြောပြပေးပါ့မယ်။ Zanco Tiny t1 က အရွယ်အစားအရမ်းကို သေးငယ်ပေမယ့် တကယ့်ကို အသုံးဝင်ပြီး စကားပြောလို့လည်းရ၊ စာရိုက်လို့လည်းရတဲ့…
January 26, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on 4GB RAM နဲ့ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Redmi 5!
Xiaomi အနေနဲ့ Redmi5ကို4GB RAM နဲ့ model အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Redmi5ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလကမှထွက်ရှိထားတဲ့ Smartphone ပါ။ စတင်ထွက်ရှိလာတာကတော့ RAM…